तिथि मेरो पत्रु » शीर्ष5प्रेमी लागि चिकी Flick सिनेमा
महिलाहरु को लागि ... राम्रो, यो Patrick Swayze छ. म अझ बढी भन्न आवश्यकता? मान्छे को लागि, यो एउटा रोचक कथा लाइन छ, नाटक, षड्यन्त्र, धोका, र केही बरु हास्यास्पद दृश्यहरु Whoopi गोल्डबर्ग द्वारा प्रदान. अनि अन्त कुटपिट गर्न सकिँदैन! ती आँसु सुख्खा हात मा Kleenex छ सुनिश्चित.
"यो Oldie, तर भले "केभिन Costner र ढिलो विटने हस्टन सुविधाहरु. यो जसको जीवन पछि उनको "प्रशंसक" को एक धम्की र छ एक "अंगरक्षक" उनको रक्षा गर्न मा ल्याउन बाध्य छ एक "गायिका" कलाकार को कथा बताउँछ. केभिन Kostner दर्ज. रोमान्टिक हुनुको अलावा, यो चलचित्र राम्रो-लेखिएको छ, प्रेमी, र कदम को पूर्ण. म यो दिन5मनोरञ्जन मूल्य को लागि तारा! अनि तपाईं पनि हुनेछ.
तपाईं यस भव्य कच्चा को अन्तरक्रिया र "भ्रातृत्वको" प्रेम छौँ, मरिस शाहबलूत विशेषता, विकास, एल. Hughley, विधेयक Bellamy, र Shemar मूर. यहाँ पनि 4-1-1: चार आजीवन मित्र आफ्नो सम्बन्ध समस्याहरूको सामना, dysfunctions, र जीवनको आविष्कारहरू. तर यो भन्दा छ. तिनीहरूले पारिवारिक परम्परा चुनौती, जातीय र लैङ्गिक उन्मुख चीरहरण सामना, र एक पूरी धेरै अधिक. यो रमाइलो, सेक्सी, र स्मार्ट. तपाईं कि मा भने अनि यो एक ठूलो कुराकानी स्टार्टर ... छ.
राक्षस पाउने बल
रोजर Ebert यो डब, यस वर्षको "सर्वश्रेष्ठ फिलिम!"
यो चलचित्र सम्बन्ध स्थिति पूरै नयाँ परिभाषा दिन्छ: "यो जटिल छ।"
यो हाले बेरी ताराहरू, बिली बब Thornton, र हीथ लेजर. "बल" एक conflicted को कथा बताउँछ, आफ्नो घडी अन्तर्गत राखिएको छ जो एक मानिस पत्नी संग समावेश हुन्छ जो रुष्ट जेल होसियार. यो ग्राफिक छ, कच्चा, riveting, र स्तरित. "Leticia" को बेरी हृदयस्पर्शी चित्रण यहाँ उनको एक अकादमी पुरस्कार कमाएका. यो "चर्चा" बारे मा के पत्ता लगाउनुहोस्.
तपाईं याकूब अर्ल जोन्स गठबंधन तपाईं के प्राप्त गर्छन्, Diahann कैरोल, छ बच्चाहरु, र एक हितमा कामदार? हाँसो को भार, प्रेम, र हुर्किरहेका, (र बस बच्चाहरु संग).
बेहद मनोरञ्जनात्मक हुनुको अलावा, यो नाली ठूलो संगीत छ, ग्लेडिस नाइट को शिष्टाचार. यो सम्झना छैन!